I-WPML: Guqula indawo yakho yeWordPress ngePlagi yeeLwimi eziNinzi kunye neeNkonzo zokuGuqula eziKhethiweyo | Martech Zone
NgoLwesibini, Novemba 24, 2020 NgoLwesibini, Novemba 24, 2020 Douglas Karr
I-WPML ngumgangatho kwishishini lokuphuhlisa nokuguqula umxholo wakho kwiziko leWordPress elineelwimi ezininzi. Ngoku ndiqhuba GTranslate iplagi ivuliwe Martech Zone ukwenza lula, ukuguqulela kumatshini weelwimi ezininzi. Oku kwandise ukufikelela kwethu kwihlabathi liphela kunye nokuqhutywa kweinjini yokukhangela kwindawo yam.
Sisebenza ekuthumeleni indawo yomthengi ngoku enabemi abaninzi beSpanishi. Ngelixa iplagi enje ngeGTranslate inokwenza uguqulo lomatshini kakuhle, ayizukubamba amanqaku ezincoko zolwimi kubaphulaphuli bethu baseMexico naseMelika esinethemba lokufikelela kulo. Ngenxa yoko, siza kuguqulela umxholo ngokufanelekileyo.
Ukuguqulelwa kwesiko kufuna isisombululo esahlukileyo, kwaye inkokeli kwiiplagi zokuguqulela zeWordPress yile WPML.
Uyiguqula njani indawo yakho yeWordPress ngeWPML
Iimpawu zeWPML zibandakanya
WordPress -Guqulela yonke into kwindawo yakho yeWordPress, kubandakanya ukuhamba, iiwijethi, amaphepha, amanqaku, iintlobo zeposi, okanye nayiphi na into. I-WPML ikwaxhasa umhleli weGutenberg.
iilwimi -IWPML iza neelwimi ezingaphezu kwama-40. Unokongeza ulwimi lwakho olwahlukileyo (njengeCanada French okanye iSpanish yaseMexico) usebenzisa umhleli weelwimi zeWPML.
Ulwakhiwo lwe-URL -Ungacwangcisa imixholo eyahlukeneyo yolwimi kwisizinda esinye (kwizalathiso zolwimi), kwimimandla engezantsi, okanye kwimimandla eyahluke ngokupheleleyo.
Umatshini wokuguqulela -Fumana iseti yentloko kwinguqulelo yakho ngokusebenzisa uguqulo lomatshini ukuze ugcine ixesha kunye neenkonzo zokuguqulela zisezantsi.
Inguqulelo yomsebenzisi -Jika abasebenzisi beWordPress abaqhelekileyo babe ngabaGuquleli. Abaguquleli banokufikelela kuphela kwimisebenzi yokuguqulela ababelwe yona ngaBaphathi boGuqulelo.
Iinkonzo Zokuguqulela -Dibanisa ulawulo lwenguqulelo lweWPML olunamandla kunye nenkonzo yokuguqulela oyikhethileyo. Lungiselela umxholo wokuguqulela ngokuthe ngqo kwiDashboard yoGuqulelo lweWPML. Xa iinguqulelo zigqityiwe, ziyavela kwakhona kwindawo yakho, zilungele ukupapashwa.
Umxholo kunye nePlagi yokuGuqulela umtya -I-WPML iyakukhulula kubunzima bokuhlela iifayile ze-PO kunye nokulayisha iifayile ze-MO. Ungaguqulela izicatshulwa kwezinye iiplagi nakwizikrini zolawulo ngqo kwi Ukuguqula umtya U mboniso.
Inkxaso yeWooCommerce kwiilwimi ezininzi
Sebenzisa iisayithi zorhwebo ngeelwimi ezininzi ngeWooCommerce. Yonwabela inkxaso epheleleyo yeemveliso ezilula neziguquguqukayo, iimveliso ezinxulumene noko, ukuthengisa kunye nokunyusa, nayo yonke into ebonelelwa yiWooCommerce.
I-WPML ikubonisa ukuba zeziphi izicatshulwa ezifuna uguqulo kwaye zikwenzela ivenkile eguqulweyo. Iindwendwe ziya kuyonwabela inkqubo yokuthenga ekwindawo yonke, ukuqala kudweliso lwemveliso, ngenqwelo kunye nokuphuma, kunye neimeyile zokuqinisekisa zasekhaya.
Awudingi ukwenza nantoni na ekhethekileyo ukwenza imixholo elungele iilwimi ezininzi. Sebenzisa nje imisebenzi ye-WordPress API kunye neWPML enakekela ezinye.
Ukubhengezwa: Ndililungu le WPML.
tags: iilwimi ezininziUkusetyenziswa kwegama elininzi kwiilwimiUlwakhiwo lweelwimi ezininziinguqulelo ye-pluginiinkonzo zoguquloUguqulelo lwe WooCommerceWordPressInguqulelo yamagamaIplagi yokuguqulela igamawpml